China Elastic fireproof chisimbiso fekitari uye vagadziri | Weicheng
Uchishandisa emulsion yemvura-semidziyo yepasi, kuvharisa nzvimbo yekunyorera: plugging yekuisa chisimbiso yemusuwo wemusuwo nezvinodiwa zvakanyanya zvekudzivirira utsi. Yekuwedzera mhando isina moto chisimbiso, kuti uwane chinodiwa chekudzivirira moto, shandisa iyo yakatemwa ukobvu kuti uone kuti iyo sealant inosangana nepamusoro peiyo pombi base zvinhu kuti uwane yakanyanya kunamatira simba. Kune mastic yakawandisa, isati yaomarara, inogona kubviswa nemvura. Yakavharwa moto isinganetsi moto, suka musuwo, uye gadzirira kuisa FS-I yekubatana pamusoro panofanira kubviswa marara akapararira, guruva, mavara emafuta, chando, wakisi, nezvimwe, uye gara wakaoma. Chimwe chinhu, mvura-yakavakirwa, acrylic acid moto-chiratidzo chisimbiso ndeye yakakwira-kuita uye yakasununguka antifungal sealant. Inogona kurwisa yakanyanya-tembiricha uye yakakwira-kumanikidza. Inogona kurwisa yakanyanya-tembiricha, yakaderera-tembiricha, Ultra-yakakwira, yepakati, yakaderera-kumanikidza uye isina kunaka kumanikidza, pamwe neepamusoro-kumhanya. Chinhu chimwe chete chisiri chisiri, chisiri chekunamatira, chakasviba tsvuku, nhema dema chisimbiso, hachisimbise pane tembiricha yemukati uye mabhureti pane yakanyanya tembiricha Flame retardant sealant iri mhando nyowani yechinhu chimwe moto fire sealant. Mumakore achangopfuura, kuitira kuzadzikisa zvido zvekusimudzirwa kwekuvaka tekinoroji yesimba, inosanganiswa nezvakanaka zvezvigadzirwa zvemumba nekune dzimwe nyika, zvakagadzirwa nemhando yepamusoro yemamorekuru.
Chigadzirwa Chigadzirwa Kwakavharwa nenyama fireproof chisimbiso
Tsanangudzo Model 25 pcs / bhokisi
Chigadzirwa Makomborero Chinhu chimwe chete, chine mukana wakanaka wekubatisisa uye kunamatira, ichigadzira dense network mamiriro mushure mekupiswa mumoto; inogona kudzivirira moto uye kupisa kupisa; vakarongeka murazvo retardant, nyore kuvaka
Makuriro Ekushandisa 1.Surface yekuisa chisimbiso kwenzvimbo dzakadzingwa pasi slab mipata, madziro caulking, mepombi dzemuchina, pombi dzekufefetedza, pombi dzinodziya, etc. mubatanidzwa uripo pakati pekumusoro kwemadziro nepasi; 3. Kujekesa Soni yekubatanidza iri pasi pekupisa kwakanyanya ine zvido zvakaomarara zvekuiswa chisimbiso chekudzivirira utsi; Kuiswa chisimbiso kwemusuwo furemu kubatanidza musono
Kuramba Kwemoto 120min
plugging yekuisa chisimbiso kweiyo furemu yemusuwo nezvinodiwa zvakanyanya zvekudzivirira utsi. Yekuwedzera mhando isina moto chisimbiso, kuti uwane chinodiwa chekudzivirira moto, shandisa iyo yakatemwa ukobvu kuti uone kuti iyo sealant inosangana nepamusoro peiyo pombi base zvinhu kuti uwane yakanyanya kunamatira simba. Kune mastic yakawandisa, isati yaomarara, inogona kubviswa nemvura. Yakavharwa moto isinganetsi moto, suka musuwo, uye gadzirira kuisa FS-I yekubatana pamusoro panofanira kubviswa marara akapararira, guruva, mavara emafuta, chando, wakisi, nezvimwe, uye gara wakaoma. Chimwe chinhu, mvura-yakavakirwa, acrylic acid moto-chiratidzo chisimbiso ndeye yakakwira-kuita uye yakasununguka antifungal sealant. Inogona kurwisa yakanyanya-tembiricha uye yakakwira-kumanikidza. Inogona kurwisa yakanyanya-tembiricha, yakaderera-tembiricha, Ultra-yakakwira, yepakati, yakaderera-kumanikidza uye isina kunaka kumanikidza, pamwe neepamusoro-kumhanya. Chinhu chimwe chete chisiri chisiri, chisiri chekunamatira, chakasviba tsvuku, nhema dema chisimbiso, hachisimbise pane tembiricha yemukati uye mabhureti pane yakanyanya tembiricha Flame retardant sealant iri mhando nyowani yechinhu chimwe moto fire sealant. Mumakore achangopfuura, kuitira kuzadzikisa zvido zvekusimudzirwa kwekuvaka tekinoroji yesimba, inosanganiswa nezvakanaka zvezvigadzirwa zvemumba nekune dzimwe nyika, zvakagadzirwa nemhando yepamusoro yemamorekuru.
Kazhinji, iyo nzira yekumira inoshandiswa kuzivikanwa, iyo yakakamurwa kuita FV-0, Fv-1 uye Fv-2 zvinoenderana nemuedzo wekuyedza kubva kumusoro kusvika pasi. Inonyanya kushandiswa kuisirwa keteni kumadziro isina moto chimiro, uye inoda kugona kweanopokana nekushomeka deformation uye moto uye utsi kudzivirira, Acrylic acid moto-chiratidzo chisimbiso inoenderana nepfuti mhando. Iyo moto-chiratidzo sealant pfungwa chiyero mhando moto-proof zvinhu imhando yepolymer yekuisa chisimbiso zvinhu zvekuvhara, izvo zvine hunyanzvi hwekuita kwekuisa chisimbiso uye moto-chiratidzo, uye inokodzera moto-chiratidzo kuvaka. Nzvimbo yekuvaka inosanganisira mapaipi esimbi, mapaipi ekudzivirira kupisa uye majoini ekuvaka. Iwo matanda anonamira anoshandiswa pamoto-chiratidzo mikova ye fire-proof sealant expression haigone kusangana nezvinodiwa nemoto, Kutarisa tarisa kuti hapana madonhwe machena ezvinhu zvisingatsve pamabhande erabha. Kana iwe ukashandisa chakareruka kuvhenekesa, chii chimwe, iwe haugadzike kuisa masiteni akavhara, ayo anokanganisa zvakanyanya kudzivirira moto uye hutsi hwekuzviparadzanisa nebasa remasuo emoto esimbi.
Iyo isina moto sealant inokodzera iko kwekubatana kuvaka pakati peceiling nemadziro emuviri, kunyanya kune iyo yakareba mubatanidzwa. Nekuti iyo yekumwaya yekuvaka iri nyore, inogona kuchengetedza manpower uye kudzikisa mutengo panguva yekuvaka. Mushure mekucheneswa nemvura, inogona kurapwa zvachose uye kupendwa. Iyo yakanyanya upamhi yemoto unopikisa majoini inogona kuve matanhatu inches, uye kupisa kwemoto kushanda kwemajoini chinzvimbo kunogona kusvika maawa maviri.
Zvadaro: Cable moto unodzivirira kupfeka